Manel Loureiro: waa kuma iyo buugaag noocee ah ayuu qoraagan qoray | Suugaanta hadda jirta
Encarni Arcoya | | Qorayaasha
Isha sawirka Manel Loureiro: Libertaddigital
Magaca Manel Loureiro hubaal wuxuu kuugu muuqdaa mid aad taqaanid maxaa yeelay waad maqashay. Haddii aad tahay qof aad u jecel akhristaha, waxa laga yaabaa inaad qaar ka mid ah akhriday. Hadaanay ahayn, oo aad joogto ka tahay telefishanka, raadiyaha ama saxaafadda, waxaa laga yaabaa inaad la kulantay. Waana in qoraagan, suxufiga iyo garyaqaanku yaqaanay sida qalinka (iyo dibnaha) looga dhigo shaqadiisa.
Laakiin, Waa kuma Manel Loureiro? Waa maxay buugaagta aad qortay? Haddii aad xiiseyneyso inaad la kulanto qoraagan, markaa waxaan kuu sheegi doonnaa wax kasta oo aan ka ogaanno isaga.
1 Waa kuma Manel Loureiro
2 Waa maxay buugaagta uu qoray Manel Loureiro
2.1 Qiyaasta z
2.2 Maalmihii madoobaa
2.3 Game of Thrones: waa buug fiiqan sida birta Valyrian
2.4 Cadhada kuwa xaqa ah
2.5 Rakaabkii ugu dambeeyay
2.8 Albaabka, xiisaha xiisaha badan ee Manel Loureiro
Waa kuma Manel Loureiro
Manel Loureiro wuxuu ku dhashay Pontevedra taariikhdu markay ahayd Disember 30, 1975. Wuxuu ka qalin jabiyay Sharciga Jaamacadda Santiago de Compostela, marka waa qareen. Si kastaba ha noqotee, intii lagu jiray maalmihiisii ​​ardaygu wuxuu fursad u helay inuu u aado shaqooyinka la xiriira telefishanka. Markii hore wuxuu u sameeyay sidii show show, laakiin markii dambe wuxuu daryeelay qoraallada waana markii uu ogaaday in hamigiisa dhabta ah uusan ahayn sharci, saxaafad ama telefishanna aan ahayn, laakiin uu wax qorayo.
Dabcan, taasi meesha kama saareyso sii wad wadashaqeynta warbaahinta. Waana taas, in kasta oo uu weriye ka ahaa Telefishanka Galicia, haddana wuxuu iskaashi ka sameeyaa wargeysyada sida La voz de Galicia, wargeyska ABC, El Mundo, majaladda GQ laakiin sidoo kale raadiyaha, gaar ahaan Cadena Ser iyo Onda Cero. Xitaa waxaad awood u yeelatay inaad ku aragto telefishanka, gaar ahaan barnaamijka Cuarto Milenio, ee Cuatro, halkaas oo ay ku laheyd qayb xilliyeed illaa 2016.
Riwaayaddiisii ​​ugu horreysay wuxuu ku yimid mareeg. Waana inuu isagu naftiisa u huray qorista buugaagta xilliyadiisa oo kale, sidaana ayuu ku guulaystay kan, in ka badan hal milyan iyo badh akhristayaasha khadka tooska ah, in markuu dhammeeyo, la daabacay. Mana aysan niyad jabin sidoo kale; Muddo yar gudahood waxay ahayd iibgeeyaha ugu fiican, taas oo ka dhigtay daabacaado badan inay fiiro gaar ah u yeeshaan qoraagan soo ifbaxaya oo soo jiitay aad iyo aad u sii badan, ma ahan oo keliya dadweynaha Isbaanishka, laakiin sidoo kale caalamka. Taasi waa sababta, ka dib buuggaas ugu horreeyay, Muujintii Z, dhowr kale oo fara badan oo sanado dhowr ah soo muuqday (kaliya 2011 wuxuu sii daayay laba buug).
Xiisad ahaan, waxaan kuu sheegi doonaa in buugiisa koowaad uu xitaa ka jiro ciyaar loox. Tan waxaa lagu maalgeliyey lacag uruurinta markii sheekada la daabacay.
Manel Loureiro wuu ku faani karaa sababtoo ah wuxuu ka mid yahay qorayaasha yar ee Isbaanishka ah ee ku guuleystey inuu ku jiro liiska buugaagta ugu iibsiga badan Mareykanka, wax aan sahlaneyn in la gaaro.
Waa maxay buugaagta uu qoray Manel Loureiro
El Buuggii ugu horreeyay ee Manel Loureiro daabaco wuxuu ahaa Apocalypse Z, 2007, guriga madbacadda ee Dolmen (in kasta oo saddex sano ka dib ay dib u soo daabacday madbacad kale, Plaza & Janés). Laga soo bilaabo xilligaas, oo markuu arkay guusha uu gaadhay, wuxuu bilaabay inuu waqti dheeraad ah u qoro qorista, sannadihii la soo dhaafayna waxaa imaanayay buugaag badan oo uu qoray. Waan dib u eegeynaa.
Ilbaxnimadu hadda ma sii jirto.
Internet ma jiro. Telefishanka ma jiro. Mid wareegaya.
Ma jiraan wax intaa ka sii badan oo ku xusuusin kara inaad tahay qof bani'aadam ah.
Apocalypse ayaa bilaabay.
Hadda waxaa haray hal gool oo keliya: BADBAADO.
Sidaas ayuu ku bilaabanayaa sheekada ah halka fayrasku ku faafay bilaa xakamaynta meeraha isla markaana uu ku dilay qofkasta oo uu ku dhacay. Dhibaatadu waxay tahay, saacado yar ka dib, ninka dhintay wuu soo noolaanayaa wuxuuna ku sameeyaa habka ugu dagaal badan ee suurtogalka ah.
Isbaanishka, qareen dhalinyaro ah ayaa mas'uul ka ah haynta xusuus qor kaas oo uu ku qoro dhammaan aragtida, maalintiisa oo dhan, uu arko. Ilaa ay ka jabaan gurigiisa oo uu isagu u cararo Galicia, kaliya hadda waxay leedahay magac kale: Apocalypse Z.
Dadkii ka badbaaday Apocalypse Z waxay ku guuleystaan ​​inay gaaraan Jasiiradaha Canary, oo ka mid ah meelaha ugu dambeeya ee ka badbaada Undead. Laakiin waxa ay halkaas ka heleen waa dawlad militari oo ku dhex milmay dagaal sokeeye, oo ay ku nool yihiin dad gaajoonaya oo ay adag tahay in la helo ilo dhaqaale oo lagu badbaado.
Waa kan qaybta labaad ee sheekadiisa koowaad, taas oo uu ku badbaadinayo astaamaha ugu muhiimsan ee sheekadiisa, taas oo Manel Loureiro ka dhigtay mid guuleysta, mar labaadna wuxuu geliyaa dhibaato isaga oo isku dayaya inuu naftiisa ka badbaadiyo kuwa aan dhiman.
Game of Thrones: waa buug fiiqan sida birta Valyrian
Buuggan dhab ahaantii isagu gebi ahaanba ma uusan qornayn isaga, wuxuu ahaa kaliya wada-qoraa, sida magaciisuba ka muuqatana, wuxuu ka hadlay taxanaha Ciyaarta Carshiga iyo raad-reebkii taxanaha lahaa.
Cadhada kuwa xaqa ah
Kuwa ka badbaaday apocalypse-ka zombie waxay leeyihiin fursad: waxaa lagu badbaadiyay bartamaha badda mid ka mid ah kooxihii ugu dambeeyay ee abaabulay ee ku haray Dhulka. Waxaa lagu qasbay inay raacaan samatabbixiyeyaashooda, waxay gaaraan Gacanka Mexico, meel u muuqata inay ku soo kobcayaan xukunka wanaagsan ee wacdiyaha dahsoon.
Waxay ku saabsan tahaywuxuu ahaa buuggii ugu dambeeyay ee Muujintii Z, halkaas oo qoraagu ku riday kooxdii badbaadayaasha dhibaato markale isku dayaya inay ku noolaadaan adduun rabshado sii kordhaya ah. In kasta oo bini aadamku aanu baran oo haddana uu hami leeyahay, beenaale yahay oo khiyaano badan, markaa halyeeyada iyo asxaabtiisa waa inay isku dayaan inay ka gudbaan caqabadaha mar kale
Rakaabkii ugu dambeeyay
Ogosto 1939. Markab weyn oo badda ka mid ah oo lagu magacaabo Valkirie ayaa u muuqda mid ku degay Badweynta Atlaantik. Markab gaadiid duug ah ayaa si kadis ah ku helay oo u jiiday dhanka dekedda, ka dib markii uu ogaaday in ilmo yar oo bilood jira oo kaliya uu hadhay ... iyo wax kale oo aan cidina awood u lahayn inay aqoonsato
Qarsoodi ah in, 70 sano kadib, waxay sii wadaa inay carqaladeyso dad badan, ilaa heer uu ganacsade go’aansado inuu markabka dib ugu soo celiyo nolosha si uu u raaco isla wadadii uu horay u maray isagoo raadinaya jawaabta wixii dhacay. Dabcan, kuwa saaran doonta waa inay noqdaan caqli ku filan si looga hortago isla waxaas oo kale inay mar kale dhacaan.
Cassandra nolosheedu waxay ku dhowdahay inay dhammaystirnaato ilaa maalinta ay la kulanto shil baabuur oo la yaab leh kaas oo iyada kaga tagaya miyir-beel. Dhawr toddobaad ka dib, iyo soo kabasho mucjiso ah ka dib, Cassandra waxay ogaatay in adduunkeedii oo dhami gebi ahaanba is beddelay: qof ayaa bilaabay inuu dabagalo gurigeeda iyo qoyskeeda iyaduna sidoo kale waxay la kulantay dhibaato naxdin leh oo aysan xakamayn karin.
Halyeeyga maahan oo kaliya inay tahay haweeney dareensan inaysan xakamayn karin nolosheeda, Taabadalkeed, "dhibaatadan" rabshadaha, dilka iyo cadaalada lagu raadinayo waxay ka dhigan tahay inuusan garanayn waxa dhacaya. Ka taxaddar, in kasta oo ay u egtahay riwaayad xiiso leh, haddana waxaa dhab ahaan loo qoondeeyay inay tahay cabsi (kuuma sheegi doonno sababta).
Halkan Manel Loureiro wuxuu doonayaa inuu ka dhigo akhristaha inuu kaqeybqaato dood ku saabsan waxa aad diyaar u noqon laheyd inaad u hurto si aad u ilaaliso kuwa aad jeceshahay.
Waqtigaas, qofna ma oga waxa dhacaya. Marka laga reebo in bini-aadamnimada intiisa badani ay isdileen maalmo gudahood. Dadkii badbaaday waxaa ka mid ah Andrea, oo ah gabar yar oo toddoba iyo toban jir ah, oo agoon ah oo xusuusteeda ay ku weyn tahay. Laga soo bilaabo maalmahaas, waxay kaliya xasuusatay sida loogu qasbay gaari milatari oo ay ka buuxaan dad rayid ah oo argagax leh oo ka cararaya isla halistaas.
Una sheeko xariir ah oo jilayaashu sirta ku hayaan, in kastoo iyaga laftoodu aysan ogayn. In kasta oo buuggu sidan ku bilaabmayo, haddana runta ayaa ah in Manel Loureiro uu markii dambe u gudbay mustaqbal aad u fog, mid adduunku is beddelay oo badbaadayaashii iyo faracoodiiba ay isku dayayaan inay ku noqdaan "caadi" ku dhex yaal burburka wixii hore u ahaa bini-aadamnimada . Laakiin taasi waa marka waxa mar dhammaaday bulshadaasi dib u soo muuqato.
Albaabka, xiisaha xiisaha badan ee Manel Loureiro
Dambi dhaqan. Haweeney quus ka taagan badbaadinta wiilkeeda. Manel Loureiro ayaa la yaabay riwaayad xiiso leh oo ka dhacday Galicia.
Marka waad soo koobi kartaa waxaad ka heli doonto riwaayadan xiisaha leh. Ma yahay lagu dejiyay Galicia dhexdeedana waxaad ku yeelan doontaa sarkaal bilays ah, Raquel Colina, oo imika yimid dalkan si uu wiilkeeda daawo ugu helo. Si kastaba ha noqotee, wuxuu ku dhacaa dil iyo maqnaansho u muuqda inay xiriir leeyihiin. Sidaa darteed, inta aad baaritaanka ku jirtid, kuma koobnaan doontid oo keliya inaad xalliso kiiska, laakiin isku day inaad badbaadiso nolosha wiilkaaga.
Miyaad ku dhiirraysaa inaad akhrido mid ka mid ah shuqulladiisa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Qorayaasha » Manel Loureiro
Buugga taxanaha Kadin, oo loo yaqaan Haweenay ama Xoogga Dumarka